MOZEA AN’I QUAI BRANLY :: Kanto malagasy eninjato mahery aranty any Frantsa • AoRaha
MOZEA AN’I QUAI BRANLY Kanto malagasy eninjato mahery aranty any Frantsa
Sehatra iray lehibe entina hampahafantarana ny kolontsaina malagasy. Hanomboka ny 17 septambra izao ary haharitra hatramin’ny 1 janoary 2019 ny fampirantiana« Madagas­car Arts de la Grande Île », any amin’ny tranom-bakoka Quai Branly, any Paris Frantsa.
Manodidina ny enimpolo sy telonjato ireo zavakanto malagasy haranty amin’izany, ka misy amin’izy ireo no efa tahirin’ny Mozea any an-toe­rana, misy kosa tahirin’olon-tsotra ary misy koa ireo sanganasan’ny mpanakanto ankehitriny.
Hasongadina ao anatin’ ny hetsika ny tantaran’ny fivoaran’ny kanto malagasy nanomboka ny Taonjato faha-10 ka hatramin’izao. Voafan­tina handray anjara amin’io hetsika io ny sanganasan’i Temandrotra, Mme Zo ary Pierrot Men. Fanohanana an-tsitrapo avy amin’ny vondron’orinasa Axina sy ny Fondation H no nahafahana nanatanteraka io fampirantiana io. Tany amin’ny taona 1946 no nisy hetsika lehibe farany toy izao momba ny kolontsaina malagasy.
Hizara telo ny fampirantiana dia ny toerana misy an’i Madagasikara eo amin’ny toerana sy ny fotoana, ny tontolon’ny velona miainga amin’ ny vintana sy ny tonom-bintana malagasy ary ny fahatelo dia ny tontolo tsy hita maso sy ny fahafatesana. Ireo kanto rehetra hita ao amin’ny fampi­rantiana dia arahina sary fanehoana sy fanazavana momba ny tantara sy ny tek­nika nanatontosana ilay kanto.
Mba hampiainana ny Malagasy ny zava-misy amin’io fampirantiana io, dia hisy manomboka ny 24 septambra izao ny fitsidihana amin’ny alalan’ny sary ny fampirantiana. Fomba fiasa miainga avy amin’ny fitrandrahana ny fivoaran’ny teknôlôjia amin’izao fotoana.
Fanahiana kolikoly Karohina ireo fiara dimampolo an’ny mpanolotsain’ny Filoha teo aloha iray
FANOMANANA NY FIDIRANA :: Mahasarika ray aman-dreny ny fividianana fitaovana eny amin’ny mpamongady
Hetsika Donia 2018